Ọzọkwa dị bụ beta nke atọ nke watchOS 3.2.2 maka ndị mmepe | Esi m mac
Beta nke atọ nke watchOS 3.2.2 maka ndị mmepe dịkwa
Na-ehichapụ beta nsụgharị nke Apple wepụtara n'ehihie ụnyaahụ, Apple na-ebufekwa nke ahụ bụkwa beta beta nke atọ nke watchOS 3.2.2 maka ndi mmepe. Dị ka nsụgharị nke macOS, tvOS na iOS, ụdị beta kachasị ọhụrụ ewepụtara maka ngwaọrụ Apple a na-ahapụ anyị obere obere akụkọ gbasara arụmọrụ. Ọ bụ maka imeziwanye nkwụsi ike, nchekwa na idozi njehie nke ụdị beta gara aga nke ụmụ okorobịa si Cupertino tọhapụrụ, yabụ anyị nwere ike ikwu na enweghị ụdị mgbanwe ọ bụla gbasara arụmọrụ nke sistemụ igwe elekere smart.
Apple na-aga n'ihu na ụdị beta maka ngwaọrụ niile na ehihie ụnyaahụ wepụtara nsụgharị niile maka ndị mmepe, ọ ga-ekwe omume na taa ma ọ bụ ọbụna echi ha ga-ebupụta mbipụta beta maka ndị ọrụ so na mmemme beta nke ụlọ ọrụ ahụ. Maka ugbu a na enweghị nhọrọ iji gbalịa akụkọ na-adọrọ mmasị, ọ kachasị mma ịhapụ beta ndị a ma chere ụdị nke ikpeazụ.
Maka ugbu a, ihe anyị doro anya banyere ya bụ na ọ nweghị ozi ọ bụla iji gosipụta mgbe awa mbụ gachara nke ndị mmepe ahụ na-ahụ koodu na data ndị ọzọ nke nsụgharị ọhụrụ ndị a. N'ọdịnihu watchOS 3.2.2 enweghi mgbanwe dị ukwuu, mana usoro nke sistemụ na - esote nke Apple ga - egosi anyị n'ọgbakọ ndị mmepe ụwa ga - eme ga - eme. na San José na-esote June 5 (WWDC) ọ bụrụ n’igosi anyị ozi ọma na-atọ ụtọ maka elekere amamịghe ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Beta nke atọ nke watchOS 3.2.2 maka ndị mmepe dịkwa
Amazon Pay bịarutere Spain: Apple Pay online nwere asọmpi